यस्तो अवस्थामा छन् सुन्दरहरैंचामा बन्दै गरेका सार्वजनिक शौचालय - निरन्तरखबर
यस्तो अवस्थामा छन् सुन्दरहरैंचामा बन्दै गरेका सार्वजनिक शौचालय
२०७६ मंसिर ३, मंगलवार , निरन्तरखबर , १३०५ पटक पढिएको
प्रदेश नं. १ मुख्य समाचार शिक्षा
विराटचोकः मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले नगरलाई विकासको बगैंचा बनाउने उद्घोष गरी ‘सुन्दरहरैंचा, विकासको बगैंचा’ नारा नै तय गरेको छ ।
सुन्दरहरैंचामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नमूना काम गर्ने भनी झण्डै २ वर्षअघि एउटा महाअभियान थालिएको छ । नगर क्षेत्रभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा ६ ओटा र विराटचोक– विराटनगर मार्गको हरैंचामा एउटा गरी ७ ओटा सार्वजनिक शौचालय बनाउने तयारी गरिएको थियो ।
शौचालय निर्माण महाअभियानअन्तर्गत सुन्दरहरैंचाको खोर्साने, विराटचोक, सलकपुर, गोठगाउँ, गछिया, बलिया र हरैँचामा शौचालय बन्ने भएका हुन् । यी ७ स्थानमध्ये हरैँचाबाहेक अरु सबै स्थान पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्दछन् ।
यीमध्ये हाल ४ ओटा शौचालयमात्रै निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । खोर्साने, विराटचोक, सलकपुर र हरैँचामा मात्रै शौचालय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
सार्वजनिक शौचालय निर्माण महाअभियान समितिका सहसंयोजक तथा कोशीहरैंचा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नवराज चापागाईंका अनुसार यी शौचालयमा आधुनिक पुस्तकालयसहितको सुविधा हुनेछ । अहिले बनिरहेका प्रत्येक शौचालय १ करोड हाराहारीको लागतमा बन्ने उनले बताए । चापागाईका अनुसार ७ ओटै शौचालय एउटै डिजाइनमा निर्माण हुनेछन् । सबै शौचालय निर्माण सम्पन्न गर्दा ९ करोड लाग्ने बताइएको छ .
युरोपेली मापदण्ड अनुसार निर्माण हुने यी शौचालयमध्ये सलकपुर र विराटचोकमा बनिरहेका शौचालय भने पुससम्ममा सञ्चालनमा आउने छन् । निर्माण भइरहेका शौचालय बनाइसक्नासाथ अन्य स्थानका शौचालय निर्माणको लागि पहल थालिने उनको भनाइ छ ।
अहिले बनिरहेका शौचालयको लागि सुन्दरहरैंचाका उद्योगी, व्यापारी र नगरपालिकाको सहयोग रहेको छ । त्यस्तै, विदेशमा बस्ने सुन्दरहरैंचावासीले पनि आर्थिक सहयोग गरेको चापागाईले जानकारी दिए ।
घुस लिँदालिँदै वडा अध्यक्ष पक्राउ
उमा कुङ्फुमा नेपाली खेलाडीले जिते ७ पदक
अफवाह फैलाएको अभियोगमा शर्मा पक्राउ
२०७७ श्रावण ३०, शुक्रबार , निरन्तरखबर , २८८४ पटक पढिएको
बेलबारीमा कोरोना विपत् आइसक्यो:कसरी सुरक्षित रहने?सरुवारोग विशेषज्ञ शेरबहादुर पुनको यस्तो छ सुझाव
२०७७ श्रावण ३०, शुक्रबार , निरन्तरखबर , २०२१ पटक पढिएको
प्रदेश १ मा संक्रमित संख्या १ हजार ८ सय माथि
२०७७ श्रावण ३०, शुक्रबार , निरन्तरखबर , ५९ पटक पढिएको
सुन्दरहरैचामा थप एक जना पुरुषमा कोरोना पुष्टी
२०७७ श्रावण ३०, शुक्रबार , निरन्तरखबर , २०५१ पटक पढिएको
सुन्दरहरैँचामा १ पुरुषमा कोरोना संक्रमण, मोरङमा ६२ संक्रमित थपिए
२०७७ श्रावण ३०, शुक्रबार , निरन्तरखबर , ८०० पटक पढिएको